हेर्नुहोस आफ्नो चिहान आफै बनाएर मृत्यु कुर्दै धनकुटाका यी बृद्दा, घरभन्दा चिहान प्यारो ! «
हेर्नुहोस आफ्नो चिहान आफै बनाएर मृत्यु कुर्दै धनकुटाका यी बृद्दा, घरभन्दा चिहान प्यारो !
Published : 1 August, 2018 10:10 am
बारीको डिलमा चिटिक्क र कलात्मक सानो घर । घर जस्तो यो चिहानमा झ्याल छैनन् । मरेपछि एकजना मान्छे सुत्न पुग्ने ठाउँ छ घरभित्र । धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका बुढिमोरङकी ८१ वर्षीया फूलमाया नेयोहाङले आफ्नो चिहान घर १५ वर्षअघि बनाउनुभएको हो ।
घरभन्दा झण्डै ५० मिटर पर बारीको डिलमा ढुङ्गा र सिमेन्ट लगाएर बनाएको चिहानमा घरको जस्तै छानो छ र साना साना पेटी पनि छन् । पेटीमा रातो र भित्तामा सेतो रङ लगाइएको छ । भित्ताको माथि फोटो राख्ने ठाउँ पनि छ । मरेपछि सबैजना पुग्ने ठाउँ त चिहान नै हो । त्यो चिहानमा अरुले नै पुर्‍याउँछन् । तर जिउँदो छँदै स्वेच्छाले चिहान बनाउने फूलमाया जस्ता मानिस बुढीमोरङमा धेरै छन् । तर अहिले फूलमायाकै कुरा गरौं ।
फूलमायाको इच्छाअनुसार उहाँका तीन छोरीले पनि चिहान घर बनाउन सहयोग गरे । ‘सुपारी दाना फोरेर, लानु के छ र मरेर, बुद्धि अर्काको मन पो आफ्नो त आफ्नो मनले चाहेको चिज त गर्न पर्छ,’ फूलमाया भन्नुहुन्छ, ‘आफ्नै मनले चाहेजस्तै मेरो घर बनाएको हो मैले ।’
फूलमाया अहिले माइली छोरीसँग बस्नुहुन्छ । भएको जायजेथा फूलमायाले माइली छोरीकै नाममा नामसारी गरिदिनुभएको छ । फूलमायालार्इ छाेरीको नाममा पास भएको घर छाडेर आफ्नै नामको चिहानमा बसाईं सर्न मन लागेको छ । चिहान घरतिर हेर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘ऊ बेलामै मर्छु भनेर बनाएको नि हउ, खै भनेको जस्तो नहुँदोरहेछ ।’
चिहान वरिपरी रोपेका फूलहरु पनि फेर्ने मन छ उहाँको । १५ वर्षअघि रोपेका फूलभन्दा फरक खालका फूल रोप्न मन छ उहाँलाई । ताकि मृत्युपछि जिउँदै छँदाको जस्तो बास्ना नआओस् । ‘आकाश गज्र्याे पानी पर्नलाई, मान्छे चम्क्यो मर्नलाई भन्छन्,’ फूलमायाले उखान सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘अब यो वर्षभन्दा बाँच्दिन कि जस्तो लाग्छ ।’
‘भात रुच्दैन, मासु पनि खान मन लाग्दैन, रक्सी मात्र मिठो लाग्छ, रक्सी खाएर पनि मान्छे बाँच्छ त ?’ फूलमाया आफैसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ । हिजोआज उहाँको खुराक भनेको दिनको एक बोतल रक्सी र सितन मात्रै हो । गाउँमा बसेका धामीले यो वर्ष गाउँबाट एकजना घट्छन् भनेकाले पनि फूलमायालाई आफ्नै पालो आयो जस्तो लाग्छ ।
चिहानको उचाइ एक मान्छे बराबर । घर एउटै । त्रिभुज आकारको दुईवटा छानो । दुईवटा छानोमा दुई दुई वटा झ्याल जस्तै आकार पनि । तर झ्याल हैन । अगाडि चाहिँ ह्वाङ दुईवटा प्वाल । ‘बुढी मान्छेलाई बायाँ र मेरो चाहिँ यो दायाँतिर हो पछि बस्ने ठाउँ,’ बुद्धिमानले चिहान देखाउँदै भन्नुभयो ‘यो मेरो मनको कल्पना हो ।’
बुद्धिमानका दुई सन्तान हुन् । एक छोरा र एकछोरी । दुवैबाट नातिनातिना भइसके । छोराछोरी र नातिनातिनाका धनी बुद्धिमानले आफ्नो मृत्युपछि सन्तानले भने अनुसार नगर्ने हुन् कि भनेर चिहान बनाउनुभएको छ । ‘छोराछोरी टाढा भए, मरेपछि त्यो मसानले भनेको कसले मान्ने भन्लान, अब छोराले बनाइदिन्छ भन्नेमा के विश्वास र ! आफैले बनायो ढुक्क ।’
अरुको मलामी बन्दा कपुरस्थान बनाउँदाका सास्ती पनि भोग्नुभएको छ । त्यसैले उहाँले आफ्नो चिहान आफै बनाएर मलामी र छोरालाई सजिलो बनाइदिनुभएको हो । ‘ढुङ्गा खोज्नुपर्‍यो, ठाउँ खोज्नुपर्‍यो, अब आफूले भनेको जस्तो हुन्छ कि हुँदैन, यति भएपछि त इष्टमित्रलाई पनि दुःख भएन नि,’ बुद्धिमानले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । चिहान बनाउने ठाउँ पनि उहाँकै रोजाइको छ ।
बारीको डिलमा । जहाँबाट सबैतिर देखिन्छ । ‘मरेपछि पनि सबैतिर हेर्दै बस्नुपर्‍यो नि त्यही भएर यो ठाउँ रोजेको हो’ बुद्धिमानले भन्नुभयो । उहाँले चिहान बनाएको ठाउँबाट गाउँ र धनकुटा बजार देखिन्छ । आफ्नै लागि चिहान बनाएका बुद्धिमानलाई तीनपटक बिहे गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।
विदेश गएका छोराछोरीसँग जस्तै लिम्बू दम्पत्तिले आफैले बनाएको चिहानसँग पनि केही आशा पालेका छन् । आशा नम्बर एकः आफ्नै हातले बनाएको चिहानमा मरेपछि आनन्दले रहन पाइन्छ । आशा नम्बर दुईः सन्तान साथमा नभए पनि बनेको चिहानसम्म छिमेकीले पुर्‍याउँछन् ।आशा नम्बर तीनः पछिका पुस्ताले पनि आफ्नो चिनो देख्न पाउँछन् । पछिसम्म सम्झना हुन्छ ।
‘काम गर्न नसक्दा त अहिले नै गएर सुतौं जस्तो लाग्छ नि, दिक्क लागेको बेला त्यही गएर बस्छु,’ शुकरानी भन्नुहुन्छ । अहिले त लास राखेको छैन, दिउँसो त यहाँ बसेर शितल ताप्न राम्रै छ, राती त हेर्दा डर लाग्छ त, आफ्नै चिहान हैट् भनेझै पो लाग्छ,’ मनप्रसाद हाँस्नुहुन्छ ।
‘अहिले त लास राखेको छैन, दिउँसो त यहाँ बसेर शितल ताप्न राम्रै छ, राती त हेर्दा डर लाग्छ त, आफ्नै चिहान हैट् भनेझै पो लाग्छ,’ मनप्रसाद हाँस्नुहुन्छ । शुकरानी र मनप्रसादका छोरा विदेश बस्न थालेको बर्षौ भइसक्यो । छोराले कुवेत र इराकमा बिताएको वर्ष त सम्झना छैन तर छोराले साउदीमा गाडी चलाउन थालेको चाहिँ १२ वर्ष पुगिसक्यो । बुहारी छुट्टै बसेकी छन् । मनप्रसाद दम्पत्तिको कान्छी छोरी पनि युएईमा जानुभएको छ । छोराछोरीसँग सल्लाह गरेरै उहाँहरुले चिहान बनाउनुभएको हो । खर्च पनि छोराछोरी र मनप्रसादले मिलेर गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार लिम्बू जातिको ग्रन्थ मुन्धुम अनुसार मरेपछि माटोमा गाड्नुपर्छ । जिउँदो छँदै चिहान बनाउनेहरुले चलन र धर्मग्रन्थ अनुसार भन्दा पनि आफ्नै इच्छाले बनाएको उहाँको बुझाइ छ । सामान्यतया लिम्बू जातिमा छोरा मानिसको मृत्यु कर्म चार दिन र छोरी मानिसको तीन दिनमा गरिन्छ । सन्तानले चिहानघर बनाइदिए भने त्यही चार दिनमै बनाइसक्नुपर्छ । तर जिउँदो छदै चिहान बनाउने चलन चाहिँ अहिलेको पाका पुस्ताले नै शुरु गरेको हो ।
एकदिन मर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर मरेपछि पनि सुखैसँग रहन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दोरहेछ । त्यसैले यहाँका लिम्बू समुदायका पाका मान्छेले आफ्नो लागि आफैंले सुविधाजनक ढंगको चिहान बनाउन थालेका हुन् । थप जानकारीको लागि भिडियो :-